juin 2014 – filazantsaramada
« Ary, indro, nisy anjelin’ny Tompo tonga teo, sady nisy mazava namirapiratra tao an-trano; ary izy nanohina ny tehezan’i Petera, dia namoha azy ka nanao hoe: Mitsangàna faingana. Dia niala tamin’ny tànany ny gadra. » (Asa. 12:7) Rehefa tonga ny fetim-pirenena malagasy, na koa taom-baovao; fanaon’ny filohampirenena malagasy ny manome fanalefahan-tsazy ho an’ireo izay voaheloka any amin’ny […]
Publié parfilazantsaramada juin 27, 2014 juin 27, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur VAHAO IZY!
« Ahoana no fomba hahafantarana ny sitrapon’Andriamanitra? » Mitohy hatrany ny fifanoloran-tanan’ny FF sy ny Département Véterinaire ho an’ny asa fitoriana ny Filazantsara eny anivon’ny Oniversiten’Antananarivo. Toy ny fanaony isan-taona àry dia nanatanteraka ny alim-bavaka ireo mpianatra ny Zoma 13 Jona 2014. Ny lohahevitra nobanjinina nandritra izany dia: « Ahoana no hahafantarana ny sitrapon’Andriamanitra? ». Natomboka tamin’ny fotoam-bavaka ny […]
Publié parfilazantsaramada juin 25, 2014 juin 25, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Fiaraha-miasan’ny Feon’ny Filazantsara (FF)/ Departement Médecine Véterinaire
MIHARY HARENA HO AN’NY TENANY IHANY!
« Fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe: Ry adala, anio alina no halaina aminao ny fanahinao, ka ho an’iza izay zavatra noharinao? Toy izany izay mihary harena ho an’ny tenany ihany, nefa tsy mba manan-karena ny amin’Andriamanitra. » Lioka 12:20-21 Ny any amin’ny tany mandroso, raha miresaka varotra sy famokarana; rehefa tafahoatra ny vokatra novokarina (entam-barotra ohatra) […]
Publié parfilazantsaramada juin 20, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur MIHARY HARENA HO AN’NY TENANY IHANY!
Isan-taona faha 21 n’ny TOBIM-PIFOHAZANA FIADANANA AMBOHIJANAKA FIAFERANA
« …Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao… » Jeremia 31:3b Manana anjara toerana lehibe eo amin’ny programan’asan’ny Feon’ny Filazantsara (FF) ny fiaraha-miasa amin’ny Fiangonana, anisan’izany ny fandraisan’anjara amin’ireny fotoan-dehibe « Isan-taonan’ny Toby Fifohazana » ireny. Ny 06-07-08 Jona 2014 lasa teo àry no nakalazana ny Isan-taona faha 21 n’ny TOBIM-PIFOHAZANA FIADANANA AMBOHIJANAKA FIAFERANA, miray amin’ny TOBILEHIBE ANKARAMALAZA. Tobim-pifohazana iray ao […]
Publié parfilazantsaramada juin 18, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Isan-taona faha 21 n’ny TOBIM-PIFOHAZANA FIADANANA AMBOHIJANAKA FIAFERANA
« Ny teny atao amin’ny antony dia poma volamena ao anaty vilia volafotsy tsara soratra. » (Ohab. 25:11) Maha izy azy ny olombelona ny « Teny »; ary dia iavahany amin’ny zavaboary rehetra izany. Ka izao! na dia samy manana vava aza ny olona sy ny biby, ny olona dia niangaran’Andriamanitra ho tsara fiteny ka dia afaka maneho hevitra […]
Publié parfilazantsaramada juin 13, 2014 juin 12, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur TENY SAROBIDY
Programan’asa eo amin’ny sehatry ny Tanora
Ny fiaraha-miasan’ny Feon’ny Filazantsara (FF) amin’ity taom-piasana 2014-2015 ity, ao anatin’ny programan’asa eo amin’ny sehatry ny Tanora (Youth Program) dia hivelatra amin’ny Sekoly Ambony tsy miankina ISPPS any Toliara sy eto Antananarivo izay manofana mpitsabo mpanampy sy mpampivelona (Paramédicaux). Nisy ny Fotoam-bavaka Fanomezam-boninahitra an’Andriamanitra noho ny fankalazana ny faha-roa taonan’ny Sekoly izay notanterahina tao amin’ny […]
Publié parfilazantsaramada juin 12, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Programan’asa eo amin’ny sehatry ny Tanora
« Fa Izy no ananantsika roa tonta fanatonana amin’ny Fanahy iray ho any amin’ny Ray. » Efes2:18 Ny Fiangonana tany amboalohany dia ny Zanak’Isiraely, izay ambara ho olon’Andriamanitra . Dia Jehovah Andriamanitra mpamorona ny tany sy ny lanitra no nitarika azy. Niavaka tokoa ny olon’Andriamanitra noho ny fitarihiny azy tamin’ny zavatra rehetra izay nataony rehefa Andriamanitra no […]
Publié parfilazantsaramada juin 6, 2014 juin 5, 2014 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur FANAHY IRAY.